nandrolone decanoate ဆေးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုကဘာလဲ? | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/nandrolone decanoate/Nandrolone decanoate ဆေးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုကဘာလဲ?
အပေါ် Posted 10 / 31 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် nandrolone decanoate.
Deca Durabolinမကြာခဏ "Deca" ရိုးရိုးခေါ်သောများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည် Nandrolone decanoate (C28H44O3), အစှမျးသတ်တိနှငျ့လုံတိုးမြှင်ကြွက်သားပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျှော့ချနှင့်သိသိသာသာကြွက်သားကြီးထွားတိုးပွားလာခြင်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်ဟို Steroid တစ်မျိုး။ ဒါဟာတာဝန်သိအသုံးပြုသောအခါ, အတော်လေးအနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးမားတဲ့အကျိုးအမြတ်ပေးထားပါတယ်။ ထိရောက်သောဆေးများ၏ကျယ်ပြန့်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အများစုယောက်ျားကောင်းကောင်းကသည်းခံ။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့, လက်ျာဝင်းရဲ့လျှင်ထွက်ရှာတွေ့ဖို့အောက်ကရောင်းရန် Deca Durabolin အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Deca Durabolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယ်ရေးဖိုင် - Deca Durabolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကဘာလဲ?
ရောင်းရန်ရှိသော Deca Durabolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သည် androgenic ဂုဏ်သတ္တိများအလွန်နည်းပါးသည့်အလွန်မြင့်မားသော anabolic steroid ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်တာ ၀ န်ရှိစွာအသုံးပြုသောအခါမလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်နှင့်ထူးခြားသောအကျိုးအမြတ်များကိုပေးသည်။ ရာသီဥတုမဟုတ်သောဒြပ်ပေါင်းများသည်အချို့သောအခြားသူများနည်းတူကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျင်မြန်စွာမထည့်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၃ ပတ်အထိဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သောကြောင့်၎င်းသည်သက်တမ်းဝက်ထက်ပိုရှည်သည်။ အချို့သော Steroid တစ်မျိုးသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျင်မြန်စွာတိုးပွားစေသည်။ သို့သော်ထိုအလေးချိန်သည်ရေဖြစ်သည်။ Deca Durabolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ရလဒ်များကွဲပြားခြားနားသည်။ အကျိုးအမြတ်များသည်နှေးကွေးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ Deca ၏နှေးကွေးသောသဘောသဘာဝကိုထေမိစေရန်၊ bodybuilders များသည်သူတို့၏သံသရာကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်စတင်ခဲ့သည် Dianabol.
Deca Durabolin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သည်ဆေးထိုးနိုင်သောပုံစံများ၊ ဆေးပြားများနှင့်အရည်များဖြင့်လာသည်။ သို့သော်၊ ဆေးပြားများနှင့်ဆေးတောင့်များသည်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ပိုကြာပြီး၊ ကာယဗလ ထိုးကြိုက်တတ်တဲ့။ အဆိုပါထိုးဆေးပုံစံနှင့်တကွ, အာနိသင်အဘယ်သူအားမျှအစာခြေကာလအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကိုသင်မီလီဂရမ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုမီလီဂရမ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြို့သောအခြားသူများထက်တစ်နှေးကွေး-သရုပ်ဆောင်ဝင်းကြောင့်ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်သည်အခြား steroids ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါရုတ်တရက် "အလုအယက်" တွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Deca Durabolin Cycle သတင်းအချက်အလက်
များစွာသောလူ Deca Durabolin ဆေးပြားသို့မဟုတ်ဆေးထိုး bulking သာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပေမယ့်, ဒီဝေးစစ်မှန်တဲ့ထံမှဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအားကစားသမားဖြတ်တောက်သံသရာစဉ်အတွင်းတစ် Deca Durabolin ဆေးထိုး regimen လည်းအတော်လေးထိရောက်ကြောင်းရှာပါ။ တစ်ဦးဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ, အားကစားသမားအစားအစာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချဖို့လေ့ကျင့်ခန်းစဉ်အတွင်း။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီအစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုမကြာခဏအဖြစ်ကောင်းစွာ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်သက်လုံ၏မရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်များ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ဦးဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်စဉ်အတွင်း Deca Durabolin တစ်ဦးအနိမ့်ထိုးနှင့်အတူဖြည့်စွက်အားဖြင့်များကဲ့သို့ဖြတ်တောက်ဒြပ်ပေါင်းများကိုကူညီပေးနေ, စွမ်းအင်နဲ့သက်လုံ add နိုင်ပါတယ် Winstrol ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ပိုငျသတိုတောင်းသင့်ရဲ့သံသရာဖြစ်သင့်, မယူပေမယ့်လုံခြုံသောသံသရာအရှည်, ဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူ 18 ရက်သတ္တပတ်ရောက်ရှိဖို့။ သငျသညျတစ်ပတ်ကိုသာ 300mg ယူလျှင်ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦး 18-တပတ်သံသရာဘေးကင်းလုံခြုံသည်။ သင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားထိုးကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်ပြောင်းပြန်, သင်သာ 12 ရက်သတ္တပတ်ရန်သင့်သံသရာကန့်သတ်ချင်ပေမည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောရေရှည်နှလုံးသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ပြဿနာများအဖြစ်အလားအလာမလိုချင်တဲ့ Deca Durabolin သက်ရောက်မှုအချို့ကိုပယ်ဖုိ့ကူညီပေးသည်။
ဘယ်မှာမှ အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Nandrolone Decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်?
သင်အွန်လိုင်းအများအပြား Nandrolone Decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Nandrolone Decanoate အမှုန့်ကိုဝယ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ စျေးကွက်မှာအတုထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်း Nandrolone Decanoate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်သည့်အခါဒါသငျသညျတခုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် realiable အရင်းအမြစ်.
9778 Views စာ
ကုန်ကြမ်း Steroid အမှုန့်များမှပြီးပြီ Testosterone ဟော်မုန်းကို Cypionate လုပ်နည်း	PCT Letrozole ကုန်ကြမ်းအမှုန့် - ကျွန်ုပ်သိသင့်သောအချက်ငါးချက် !!!